Halkaan waxay gabdhuhu ku dhiirradaan inay ka hadlaan gudniinka gabdhaha - DN.SE
En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-06-19 22:53
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insidan/halkaan-waxay-gabdhuhu-ku-dhiirradaan-inay-ka-hadlaan-gudniinka-gabdhaha/
Halkaan waxay gabdhuhu ku dhiirradaan inay ka hadlaan gudniinka gabdhaha
Bild 1 av 4 Iskoolka dabaasha oo ku yaal Borlänge looguna talagalay dadka dhoowaan yimid, halkaas oo ay ku kulmaan gabdho ka kala yimid 14 dal, oo ay ka mid yihiin Kurdistanka Ciraaq iyo Soomaaliya, kuwaas oo gudniinka gabdhuhu caadi ka yahay.
Bild 2 av 4 Fartun, 20, oo ka timid Somalia ayaa hoggaamisa dabaasha iyo kulanka aqoon-isweydaarsiga oo ka dambeeya.
Bild 3 av 4 Anissa Mohammed Hassan waxay ka shaqeysaa ka hortagga gudniinka gabdhaha iyo caawimaadda kuwa la soo guday.
Bild 4 av 4 Dhakhtar Hannes Sigurjonsson iyo kooxdiisu waxay diyaariyaan qolalka qalliinka.
”Kaadidu waqti aad u dheer ayey igu qaadataa oo xanuun ayaan dareemaa.” Gabdhaha ka qaybgala barashada dabaasha loogu talagalay dadka dhowaan dalka yimid oo laga qabanqaabiyo degmada Borlänge waxay ka sheekeynayaan xanuun iyo dhibaatooyin kale. Horay uma aysan ogeyn in dhibaatadu la xiriirto gudniinkii lagu sameeyey.
Waxaa lagu qiyaasayaa in in ku dhow 38 000 gabdhood iyo dumar oo ku sugan Iswiidhen ay yihiin kuwo la soo guday.